Ny ankizivavy hiaiky ny fitiavana hahazo ny harona - Video Mampiaraka USA
Efa antitra sipa anao ny daty mangataka te. Na angamba tsy izany zazavavy ao an-kilasy, tsy maintsy foana akaiky naniry ny ho avy, fa tsy fantatro ny fomba tokony atao. Ao anatin’ity Lahatsary ity, Mampiaraka USA lahatsoratra, ianao hianatra ny fomba zazavavy iray ny fihetseham-po, manaiky, ary tsy mba ho voaroaka. Efa antitra sipa anao ny daty mangataka te. Na angamba tsy izany zazavavy ao an-kilasy, tsy maintsy foana akaiky naniry ny ho avy, fa tsy fantatro ny fomba tokony atao. Ao anatin’ity Lahatsary ity, Mampiaraka USA lahatsoratra, ianao dia hianatra manaiky, toy ny anareo, ny ankizivavy ny fihetseham-po tsy lavina. Aoka ho fantatro ny zavatra tsapanao. Miresaka momba izany amin’ny sehatra tsy miankina. Tsy tantara an-tsehatra, ary ny tampony-pitiavana Fihetsika.
Hikarakara ny fijery ivelany ary hanao zavatra amin’ny fiainanao. Mba hahazoana lehibe, fahaiza-manao vaovao. Tsy voatery hitovy ny romantics. Jereo ny fomba izy mamaly mampamangy sy handinika ny»tiako ianao». Rehefa nitsiky izy, mena, kely menatra voakasika na ny toy izany koa ny teny, dia namaly izy, dia mahafantatra tsara izay tianao. Manao hiala fotsiny mba hitsena anao, raha ihany nandritra ny fotoana fohy:»izaho anio hariva miaraka aminao ao amin’ny faritra te-handeha eny an-dalana ho an’ny kafe miaraka amiko.»Raha manaiky azy ny fihetseham-po, dia tokony tsy hahatonga ny mahitsy, raha misy bunch ny olona ankehitriny. Izany dia afaka mametraka anareo eo ambany fanerena ary unwell ny hanomanana ireo, ary izy dia mahatsapa voatery, angamba, valiny tsara. Mandehana miaraka aminy ho tsara tarehy, toerana mangina, ary ataovy azo antoka izy dia tony alohan’ny fizarana anao ny fo fitsapana. Aoka ho fantany fa tsy tahaka ny azy ireo eo amin’ny manodidina, ary izany dia mahatonga azy mahafinaritra foana. Mihazona anao nandritra ny fotoana fohy, noho izany dia afaka haingana hahazo ny fotoana. Izany no mamitaka anjara, fa raha miaina ao amin’ny lalina, ka ny telo isaina, ary tena mora ny mahazo avy, dia hahatsapa tsara kokoa. Raha mbola tsy tonga ny avy ao am-po, dia tokony ho mirehareha amin’ny herim-po. Angamba izany rehetra izany dia tonga ny tanteraka ny tsy nampoizina ho azy ary dia mila fotoana mba hahazo ny fihetseham-pony tsirairay avy ao amin’ny Mazava. Hanome azy fotoana izao.»Tsy tiako ianao mba mahatsapa hafahafa na tsindry. Fotsiny aho te-hamela anao hahafantatra ny fomba tsapako momba anao.Fantatro izany no tena tampoka. Mazava ho azy fa tsy nanana fotoana betsaka kokoa ny mieritreritra momba izany noho ianao. Fa eto aho ho anao, raha miresaka bebe kokoa momba ny te.»Soso-kevitra iray manokana ny andro sy ny fotoana ny fotoana. Raha liana ihany koa amin’ny zavatra mihoatra noho ny namana, afaka manao izany miaraka amin’ny tsara tarehy ny hariva manao izany»fomba ofisialy Tena faly aho rehefa miara-isika, ary te-hanao anao ho sambatra ho toy ny anao ho ahy. Dia manome ahy Fahafahana izany, ary ny takarivan’ny zoma efa hariva miaraka amiko.Tsy te-hahalala ahy hahatsapa voninahitra, raha ianareo, dia omeo ahy ny Vintana, tsara ianao. Te faran’ny herinandro ity Ny»Kanto ny Lalao Video»fampirantiana.Hey, izaho nahazo Tapakila ho an’ny lalao nandritra ny faran’ny herinandro. Mihevitra aho fa izany dia ho lehibe raha tsy hiaraka amiko no, avy eo isika afaka voly izahay roa kely kokoa.»Inona no hitanao eo ny sarimihetsika, na tsy miasa amin’ny tena fiainana. Fotsiny ny tenanao sy ny tsy ho sarotra kokoa noho izany — ihany no ilaina mba hiaiky aminy ny fihetseham-ponao. Ireto misy zavatra tena tokony hialana:»Raha toa isika ka tsy afaka ny hiara-hivory, tiako mba tsy ho namana miaraka aminao.»Ireo ary mitovy ultimatums akaiky sy hanome anao ny fihetseham-po ratsy. Tsy mazava tsara ny tena tantaram-pitiavana fihetsika.»Efa nisy ny fijoroana ho an’ny volana eo ianao.»Ho toy ny tsy mifatotra araka izay azo atao. Tokony hahatsapa ny aina sy azo antoka, tsy ny rehetra tampoka ny basy ny tratrany.»Tiako ianao toy ny Winnie the Pooh ny tantely, toy ny gummy andian-jiolahy mitondra ny ranom-boankazo. Ataovy fohy sy miavaka, ary tonga ny fotoana. Minamana amin’ny ankizivavy, amin’ny lasa tsikelikely ny ampahany tamin ny namana sy ny fantatra faribolana. Hanatevin-daharana ny Fikambanana, izay toerana dia, na ny mihantona avy amin’ny antoko na ny Fivoriana izay Fiarovana ho tonga. Tsy hiala eo amin’ny tavany mampahatsiahy anao kokoa matetika niaraka taminy, ary tsy ho ela dia ho namana tsara. Fantaro ny zavatra mampifaly azy, ary inona no tsy. Hianatra ny idiosyncrasies sy ny quirks. Izany ianao efa eo amin’ny lalan’ny fahombiazana, satria ny ankizivavy tsy toy izany, raha toa ka ianao ihany no mahaliana azy ireo satria izy ireo no tsara tarehy. Te olona izay mahatakatra ny tena. Miresaka ny momba ny zavatra toy ny Fivavahana, ny politika, ny tanàna niaviany, ny fianakaviany, sy ireo lohahevitra manan-danja. Babbles ihany koa ny fanaratsiana. Tokony hanome azy ny fahafahana hihaona aminao. Manomboka ny resaka mahafinaritra niaraka taminy, ary aoka ny ankamaroan ny fotoana firesahana, fa vatan-kazo rehetra izao, ary indray. Manohana anao inona no mahatonga anao ho sambatra. Ho anareo manan-tsaina, angamba ianao koa dia Toy izany. Na dia tsy: nitsidika ny fampisehoana ny tantara an-tsehatra na ny fampisehoana. Tokony ho fantatrao fa»hahazo izany», izay manomana anao amin’ny fifaliana ny fiainana. Tokony ho fantatrao koa ny firehetam-po. Misy zavatra tena Areti-sy tsara Tarehy. Anao ho namana tsara amin’ny maha-misy ho anao raha ny ratsy, ianao hanampy azy, amin’ny alalan’ny fitondrana ianao, Hehy sy mahafinaritra eo amin’ny fiainana, ny fikarakarana, ny maka fotoana mba hanao zavatra. Tsy matahotra ny»Namana Faritra»: Raha tena mifanaraka ny tsirairay, tsy maninona, raha mbola araka ny namany ireo, izy dia hamaly ny fihetseham-ponao. Tsy maintsy ho afaka matoky ianao. Ny tsy fivadihana eo anatrehanao ny mangataka aminy na inona na inona eo amin’ny Daty, ary aoka tsy ny hisambotra anao fitia ny hafa ny zazavavy na ny mihantona avy be amin’ny zazavavy hafa. Mizara ny zava-miafina aminy, satria izy koa dia mizara azy miaraka aminao. Didim-pitsarana na oviana na oviana ianao na mihomehy ianao noho ny zavatra nankinina aminao. Omeo azy ny fahatsapana fa izy dia ho afaka hiresaka aminareo ny momba ny zava-drehetra. Raha tianao, fa efa lasa ny fihetseham-po ho anao, anao mila bebe kokoa ny orinasa faharoa, mba ho araka ny tokony ho izy mba ho afaka ny tsirairay. Dia ny fanontaniana hoe tianao ianao hinbegleiten any ho any, tsy toy ny Daty fa toy ny namana. Afaka mijery ny fanasana ny an-trano mba handray azy amin’ny zavatra (e.g. sarimihetsika tsy hita, na ny hilalao lalao video) dia tokony hahatsapa tsara rehefa izy no momba anao. Tokony hahatsapa ny zava-dehibe sy eo amin ny vatana mahatsapa tsara. Omeo azy mampamangy, aza ianao tsy hanidy, ary mamporisika azy ireo hatrany mba hanohy ny tanjona. Ampahafantaro azy fa raha toa ka manana kinga be ny zavatra, na dia izany fotsiny ny zavatra Mahazatra, toy ny fanampiana ny hafa ny olona. Maro ny olona misalasala ny manomboka ny fifandraisana, satria matahotra ny ho voafetra sy tsy afaka intsony ho azy. Mieritreritra fa dia tsy indray no fotoana ho an’ny tenanao, na oviana na oviana indray amin’ny namanao na ny mino fa izy ireo dia nahalala ny olona hafa. Hiavaka amin’ny hafa, ary asehoy azy fa tsy maintsy izany Tahotra ianao tsy mila manana. Manaraka ny tombontsoany manokana sy ny manome azy ny toerana mba hanao ny zavatra. Tsy ny fiafaran izao tontolo izao raha toa ka manana anao indray. Ianao no halahelo, fa ianao koa misy olona iray Vaovao. Fihetseham-po na ny fifandraisana tsy azo terena. Tsy mendrika ny olona tahaka anao amin’ny fomba mitovy. Tsy diso fa ianao no mizara ny fihetseham-ponao ary tsy ny tsiny: Misy olona fotsiny aza dia mety ho samy hafa. Afaka foana ny miasa bebe kokoa ho anao, ho anao, ny Fotoana manaraka dia hiaiky ny ankizivavy ny fihetseham-po, ny tsara indrindra ny lafiny fampisehoana. Izany no hany fomba ianao dia hahita tovovavy iza no hanimba ny fihetseham-ponao. Izany no kely mampatahotra, fa tokony hiaiky ny fihetseham-po amin’ny olona. SMS, E-Mail na ny namana ho toy ny fitaovana ny olona rehetra ny fomba izay mamela fotsiny ny fihetsika sy sain-jaza mba hampitaina aminareo, dia tsy mety ho toy izany zava-dehibe ny ahy. Raha toa ka tsy mikarakara ny vatany, dia tsy hanome izany, fa isika no afaka hikarakara ny hafa, na ho tahaka ny olona hafa. Mahafinaritra ianao ary tokony dia toy izany koa no hiatrehana izany. Hajao ny tenanao sy hitondra ny tena mifanaraka amin’izany. Sasao tsy tapaka, mampiasa deodorant, manao fitafiana madio izay antonona anao, ary tsara eo ianao toa. Tsy misy olona maniry ho amin’ny olona iray izay mahatonga na inona na inona ary na inona na inona. Mampiseho ankizivavy ianao, ny fampandehanana, mahaliana ny olona, ny anao hitsangana avy amin’ny Fandriana, ary izay tokony hatao. Fanatanjahan-tena, mianatra hanao ny fahaiza-manao vaovao, hanatevin-daharana ny Fikambanana, ny hifantoka amin’ny an-tsekoly: inona no mahafinaritra ho anao. Tovovavy rehetra, izay handre ny aminareo, na mahalala ianao dia hianatra mba mankasitraka anao ho toy ny tsara ny olona. Asa momba ny maha-izy azy, raha toa ianao raha tsy izany kosa fitiavan-tena. Foana ho mahalala fomba ny olona manodidina anao, ary miasa, angamba, na dia eo an-tsitrapo fototra. Ny mitaona ny karazana tsara zazavavy te ho, amim-pahagagana. Raha eo amin ny fiainanao na inona na inona mitranga, dia afaka misintona amin’ny mangatsiatsiaka ny fahaizana na ny Talenta, mbola misarika ny saina ny ankizivavy iray eo aminao. Raha toa ka mbola manana na inona na inona, ny zavatra tsara ianao ao amin’ny, avy eo ity Fahafahana sy mahazo mandray zava-Baovao. Ny tsy maintsy ho vokany eo amin’ny tovovavy ary dia mendrika izany rehefa ela ny ela ho anao. Mba hanaovana izany, dia mila mahazo ny mahafantatra ianao angamba na ny namana eo amin’ny drafitra mba hanokatra. Izy efa natsipy ny maso amin’ny iray amin’ireo karazana hafa ianao, dia hifanena amin’ny fiaiken-keloka amin’ny marenina ny sofiny. Na dia izy no liana amin’ny olon-kafa, dia afaka miezaka ny vintana, na izany aza, ny roa andro fahoriana. Tsy ny olona rehetra dia manana ny Fanatanjahan-tena ao aminy. Raha matahotra ianao mba hanontany anao, satria ianao manana hevitra izay ianao dia tokony hilaza hoe: aza matahotra, fa tsy ho mafy tahaka ny tarehiny. Fahatokisan-tena dia ny Iray ary O raha ataonao amin’ny olona iray ianao toy izany. Matoky tena endriky mahatonga izany manintona sy ny mahasoa ny mianatra raha ianao sy ny ankizivavy tianao. Raha ny ankizivavy iray mba tena hanana fahatsapana mahery noho ianao, dia miankina amin’ny fomba tsara ianao ao amin’ny dinidinika. Hianatra manomboka tsara kokoa ny resaka, sy mitarika, ary tsara tarehy tsy ho ela ianao dia ho tiako kokoa ianao eo amin’ny fiainana.
Ho mahalala fomba ny namana
Tsy ho be ny namana, raha tsy izany dia mieritreritra ianao iray ny Namany.
Raha toa ianao mahita azy ianao raha mitaritarika zavatra Mavesatra, haka azy, ary mitondra azy any amin’ny toerana mila izany. Mba mitenena raha toa ka manana fotoana sarotra aminao, mijery noho ny sorony, dia toa toy ny hoe ianao no mba mijery izany. Raha mahazo minitra farany ny tahotra, hahalala ny ny sekoly ny tovovavy tsara tarehy, ianao dia manasa anao mba ny sakafo hariva, hahafantatra azy, ny fanontaniana lehibe, ary izany dia tsara. Hiaiky ny fihetseham-po, ary raha toa ka manana anao indray, dia mampiseho ny toetra maha-lehilahy ary ny aoka izy handeha. Ny hoe, raha tia zavatra iray, dia aoka izany maimaim-poana. Lazao azy manokana fa tsy tahaka ny azy. Tsy antso, manoratra SMS, fa milaza izany ho azy manokana. Mety ho mampatahotra, dia midika bebe kokoa, ary izany dia mora kokoa sy tsy dia mahamenatra ny miresaka amin’ny olona iray mifanatri-tava
← Maimaim-poana ny mampiaraka toerana
Izay vehivavy ao Berlin, hitsena ny vehivavy Tokan-tena →